FIZARANA 5: Fr. Michel Rodrigue - Ny fampitandremana, ny fahoriana ary ny fiangonana miditra amin'ny fasana - fanisana amin'ny fanjakana
Fizarana 5 amin'ny "famerenana amin'ny laoniny" miaraka amin'i FR. RICHRIGUE MICHEL
Hafatra avy amin'i St. Michael ka Fr. Michel Rodrigue
Manodidina ny roa herinandro alohan'ny Krismasy, hoy aho tamin'Andriamanitra hoe: "Dada ô, raha te handefa hafatra amin'ity taona ity ianao, dia vonona hihaino anao aho ary hanao izay tadiavinao."
Tamin'ny 3 Janoary 2019, nahazo hafatra aho raha nandeha an-trano aho. Tonga tao amiko toy ny tselatra izy io, nahavaky ny afovan'ny foko. Hoy ny Ray:
Anaka, handray hafatra ianao amin'ity taona ity, fa tsy ho avy amiko izany. Nangataka an'i Md Michael aho mba hanome anao ny hafatra.
Nahatsapa fangoraham-po be tamin'ny teniny aho, izay nampita tamiko fa sarotra loatra taminy ny milaza izay ho avy.
Nanomboka ny Masindahy Michael Ilay Arkanjely:
Ry Michel, efa nitafy ny anarako hatramin'ny andro nanaovana ny batisanao, izay nankalazain'ny fiangonan'ny fiangonana Michael Michael. Izaho sy ianao dia voafatotry ny sitrapon ’ny Ray sy ny Ra sarobidy nataon’I Jesosy, Izay namonjy an’ izao tontolo izao tsy amin ’ny fampihorohoroana ny ota. Amin'ny alàlan'ny Vatana masin'i Kristy, izay fiangonana katolika, dia manolotra ny Mpamonjy tokana isika.
Tamin'io fotoana io dia nahita hazo nisolo tena ny Fiangonana aho niaraka tamin'ny sampan'ny antokom-pivavahana sy fisarahana kristiana, ary ny ampahan'ny Fiangonana dia ny Eglizy Katolika.
Ho tonga mpitondra hafatry ny Ray Mandrakizay ho an'ny Apôstôly Apostolikan'i Masindahy Joseph Benedict Labre aho sy ho an'ireo rehetra handre izany antso izany.
Ary namerina ny hafatry ny Ray i St. Michael:
Imbetsaka ilay Mompera Masina Indrindra dia nanasa ny olombelona hibebaka sy hiverina amin'i Jesosy Zanany.
Efa niely tety an-tany matetika i Biriky Maria mba hampahatsiahivana ny olombelona hiverina amin'i Jesosy, indrindra amin'ny tantaran'ny Fiangonana vao haingana: tany Fatima, Lourdes, sy Pontmain, France: tany Beauraing sy Banneux, Belzika; any Medjugorje koa. Medjugorje dia toerana masina. Nipoitra tao Garabandal ihany koa ny Our Lady, ary manasa anao hamaky ny hafany aho.
Ny fisehoana isan-karazany manerana an'izao tontolo izao dia nanambara ny filàna miverina amin'i Kristy amin'ny alàlan'ny fieken-keloka ny ota, ny fanarenana ny raozy, ary ny fahatokiana amin'ny fahamarinana amin'ny Eokaristia. Nisy hafatra maromaro nalefa ho an'ny zanak'olombelona hampitandrina ny kaomionista sy ny tsy mino an'Andriamanitra tsy manafika an'izao tontolo izao sy ny fiaraha-monina.
Ara-tantara tany Etazonia, dia nandefa ny Komunisma ho hery ara-politika ratsy i Amerika. Ankehitriny ny devoly dia tsy mandeha amin'ny lohany amin'ny alàlan'ny fampisehoana politika lehibe, fa ny fampidirana ny fahalalahan'ny Kominisma ary miadana ao amin'ny fiaraha-monina amin'ny alàlan'ny ideolojia. Izany no antony nahatongavanay lalàna ho an'ny euthanasia. Nilaza ny mpitantana fa hitahiry vola isika, fa ny loharanon'ity fomba fisainana ity dia avy amin'ny foto-kevitra kaominista izay tsy misy olona intsony, fa zavatra ilaina ho an'ny sarambabem-bahoaka mandra-pahatongan'ny fotoana tsy ahombiazany - ary avy eo izy.
Ny fanaratsiana sy fitenenan-dratsy ny olona hanohitra an'Andriamanitra sy amin'ny fiainana amin'ny endriny rehetra dia nitombo hatrany amin'ny fanadiovana ankehitriny.
Sarotra be io raha nilaza tamiko sy izao tontolo izao Andriamanitra.
Manavao ny fanamasinana anao amin'ny Fila masin'i Jesosy sy i Maria! Izay rehetra namindra ny fianakaviana Masina sy ny kitay Krismasy dia harovana avokoa. Tandremo ny fihazonana ny fonao amin'ny fankamamiana ireo fahagagana rehetra izay nataon'ny Tompo ho anao mandritra ny androm-piainanao.
Misy haizina lehibe maneran-tany, ary tsy ho ela ny mason'ireo zanak'Andriamanitra dia hahita ny fomba handotoan'ny tany amin'ny ota. Ny orana dia milatsaka any amin'ny afobe. Hitsidika ny olony Andriamanitra.
Ny iray dia tokony ho ao anatin'ny endrika fahasoavana hahazoana famonjena. Enga anie ireo tsy vita batisa no mangataka Batisa Masina ho famonjena izay antenain'izy ireo. Enga anie ireo vita batisa hahita indray ny toe-pahasoavana, raha very izany noho ny fahotany. Aoka ho azo antoka fa amin'ity taona ity, ny hanao konfesy ankapobeny amin'ny fandraisana ny didin'Andrimanitra ho fahazaran'ny fiainanao, ary miaiky ny fahotanao rehetra na nesorina.
Hanohy ny vavaky ny rosary. Mivavaha amin'ny Tenin'Andriamanitra. Tohizo ny fifadian-kanina, raha azo atao, ny alarobia sy zoma ho famonjena ny mpanota. Ho an'ny fiandohan'ny apôstôly an'i Saint Benedict Joseph Labre, dia ampahatsiahivo aho fa ny fiantrana sy ny fanafahana dia ampiasaina voalohany amin'ny fifadian-kanina sy ny vavaka.
Amin'ny olona rehetra, hoy aho hoe: "Mahatoky!" Aza mety hofitahina ianareo raha diso ny fampianaran-diso ataonny devoly. Mivavaha amin'ireo anjelin'Andriamanitra, mpiambina sy mpiaro anao. Angataho ny fitsabahan'ny tafika any an-danitra amin'izao fotoana izao, izay anao. Ho hitanao ao amin'ny fahalemena ny herin'Andriamanitra. Izaho sy ny anjely rehetra eto dia hiaro anao sy hiaro anao amin'ny fanafihan'ilay ratsy.
Ny fitahian'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina dia miaraka aminao.
Manomboka izao, ho avy ny ora ary antomotra ny andro izay hahitanay ny famonjen'Andriamanitra. Mitandrema! Androany, mihoatra ny taloha dia mivavaka amin'ny Renin'Andriamaitra isika mba hitsangana amin'ny apôstôly amin'ny andro farany!
Misaotra anao tamin'ny famaliana ny antson'ny Tompo.
-St. Michael, ilay Arkanjely
Ny fotoana ho avy dia tsy faran'izao tontolo izao. Apetraho eo amin'ny lohanao izany. Ny zavatra manakaiky dia ny faran'ny fotoana manahirana izay hidirantsika izao. [Fr. I Michel dia miantso ity fotoana ity alohan'ny fampitandremana, ny fahoriana madinidinika ary amin'ny fotoana aorian'ny fampitandremana, Fijaliana.] Hifarana, araka ny nampanantenain’i Maria Virjiny antsika tany Fatima, miaraka amin’ny Fandreseny feno voninahitra ary hitobaka eran-tany ny fiadanana.
"Amin'ny farany, handresy ny foko tsy misy kilema. . . ary fotoana fandriam-pahalemana no homena an'izao tontolo izao. ”
Nanazava tamiko ny Ray fa rehefa maty Jesosy dia maty tsy ho famonjena antsika fotsiny, fa nanavao ny zava-drehetra. Amin'izao vanim-potoana fandriampahalemana ho avy izao dia hanana lanitra vaovao sy Tany vaovao isika, havaozina miaraka amin'ny fanomezana ny fanavotan'i Jesosy Kristy. Hodiovin'izao tontolo izao izy, ary ny zavaboary rehetra dia ho eo ambanin'ny anarany malaza.
Fa hiverina i Satana. [Fr. Nilaza i Michel fa hitranga aorian'ny taranaka telo.] Aorian'ny fiverenany ihany no hiafaran'izao: ny fitsarana farany, ny Fiaviana Fanindroany, rehefa ny Fandresen'ny Fon'i Jesosy, Mpanjakan'izao rehetra izao dia hatao. miharihary.
Maika ny fotoana. Ho avy ny fahoriana, ary tsy ho ela. Ao anatin'ny fotoana hamoahana maika isika. Rehefa nomen'ny Ray ahy ny fraterité dia nangataka ahy hanamboatra izany haingana izy io satria ho fialofana ho an'ny pretra maro izay ho tonga ao. Ny ankamaroan'izay ho hitanao dia ho nohamasinin'ny devoly. Ho hitanao ny olona miady mifanohitra noho ny antony politika. Ny fanenjehana ny kristiana, izay efa nanomboka, dia ny olona tsirairay amin'ny alàlan'ny fanesoana sy fiampangana, dia avy amin'ny lalàna tsy fanarahan-dalàna. Tsy ho afaka hanaraka ireo lalàna ireo amin'ny feon'ny fieritreretana tsara ianao, noho izany dia hidina eo ambanin'ny fahefana sivily ny fanenjehana.
Lamesa ekomenika no hampidirina ao am-piangonana. Hamboarin'ny loham-pinoana samy hafa, voalohany, ao amin'ny komity iray. Ho dingana farany, dia hatolotra any Roma, amin'ny papa. Antontan-taratasy nosoratan'i Papa Francis, Magnum Principium, dia nanomboka tamin'ny 1 Oktobra 2017, izay nanome fahefana ny federasiona nasionaly an'ny solombavambahoaka mba hampiditra teny na vavaka vaovao amin'ny fomban'ny Lamesa ho an'ny fireneny. Firenena maro no voatazona amin'ny fahotan'ny fanambadiana ary efa nivily niala tamin'ny lalan'ny Tompo. Raha manan-kery hanao ny fanovana ny Mass ny synoda eveka ao amin'ireto firenena ireto, azonao antoka fa hitondra zavatra tsy mety amin'ny papa izy ireo. Raha tsy manao sonia ny soso-kevitr'izy ireo ny papa, midika izany no fandavana ny zavatra nomeny azy ireo ny fahefana hataony, inona no hitranga? Schism, izay iray amin'ireo zavatra tsy ho ela hitantsika ao amin'ny Fiangonana.
Hanao sonia amin'ny taratasy fotsiny i Roma satria ho tsapan'izy ireo fa nomena ny fahefana rehetra ny Eveka hanao ny fanovana ao amin'ny fireneny. Tsy midika izany fa ny papa no manaiky ilay antontan-taratasy.
Ho azonao ny mamantatra fa miely ara-tontolo ny Lamesa satria tsy hitovy ny tenin'ny fanamasinana. Tsy tokony hanatrika ireo antsoina hoe "Lamesa ianao." Mety ho tsara kokoa ianao raha mihinana mofomamy soda satria ny mofo dia mbola ho mofo. Tsy nohamasinina izany. Ity no famantarana voalohany avy amin'ny tempoly. Miditra ao am-pasana izao ny Fiangonana, ary handia ny dingana mitovy amin'i Jesoa, Izy tenany mihitsy. Tsy tsara noho ny Mpampianatra isika; isika ihany no mpanara-dia azy.
Ny antikristy dia ao amin'ny ambaratongam-piangonana ankehitriny, ary maniry ny hipetraka hatrany amin'ny sefaran'i Petera izy. Papa Francis toa an'i Peter, ilay apostoly. Hahatsapa ny fahadisoany ary hiezaka hanangona ny Fiangonana hiverina eo ambany fahefan'i Kristy, saingy tsy ho afaka hanao izany izy. Hatao maritiora izy. Papa emeritus, Benedict XVI, izay mbola manao ny peratra papany dia hiditra ao amin'ny fivoriambe iray, manandrana hamonjy ny Fiangonana. Nahita azy aho, malemy sy malemy, notazonin'ireo mpiambina Swiss roa, nandositra an'i Roma ka nandrava ny manodidina. Niditra niafina izy, saingy hita. Hitako ny maritiora nataony.
Nihaona tamin'ny evekako tato ho ato aho. Nisy pretra iray teo, ary niresaka momba ireo famantarana ny fotoana farany izay manondro ny fotoantsika isika, ary hoy ny pretra: “Tsia, tsia. Tamin’ny taonjato faha-13 ity zavatra ratsy ity no niseho, ary tamin’ny taonjato faha-18, izany zava-dratsy izany no niseho. . . "
"Eny, fantatro ihany koa ireo zavatra ireo," hoy aho. "Ny zava-dratsy dia nitranga foana, saingy tsy miresaka ny taonjato faha-13 na ny taonjato faha-18 aho fa miresaka famantarana ankapobeny. Famantarana ny fotoana. ” Rehefa miresaka kely momba ireo fotoanan'ny farany ianao dia manondro fotoana iray ao am-piangonana ny olona rehefa sarotra ny raharaha.Fanamarihan'ny editor: Namaly an'io fanoherana io koa i John John Newman: "Fantatro fa sarotra ny fotoana rehetra, ary isaky ny misy saina matotra sy miahiahy, velona ho an'ny voninahitr'Andriamanitra sy izay ilain'ny olona, ​​dia mety tsy mandany fotoana firy. mampidi-doza toy ny azy ihany. Amin'ny fotoana rehetra dia manafika ny Eglizy izay tena Renin'izy ireo ny fahavalon'ny fanahy ary mampitahotra sy mampatahotra farafaharatsiny rehefa tsy mahavita ratsy izy. Ary amin'ny fotoana rehetra dia misy ny fizahan-toetra manokana izay tsy nianjadian'ny hafa… Tsy isalasalana fa, nefa mbola miaiky izany ihany, kanefa mieritreritra aho… ny antsika dia manana haizina hafa noho ny teo aloha rehetra. Ny loza mety hitranga amin'ny fotoana eo alohanay dia ny fihanaky ny areti-panjakan'ny tsy fivadihana, izay nambaran'ny Apôstôly sy ny Tompontsika fa izy no loza ratsy indrindra amin'ny andro farany amin'ny fiangonana. Ary farafaharatsiny aloka, endrika mahazatra amin'ny andro farany no ho tonga manerana an'izao tontolo izao. ” -St. John Henry Cardinal Newman (1801-1890 AD), toriteny tamin'ny fanokafana ny Seminera St. Bernard, 2 Oktobra 1873, The Infidelity of the Future Eny, sarotra ny raharaha any amin'ny firenena iray, fa tsy any amin'ny firenena hafa. Ankehitriny, ratsy ny zava-drehetra, tsy amin'ny firenena iray ihany, fa na aiza na aiza misy izao tontolo izao.
Nandalo fotoan-tsarotra be ny Eglizy taloha, saingy tsy nahita haizina be intsony izahay tao amin'ny Eglizy Katolika. Hiditra ao am-pasana koa ny Fiangonana protestanta satria kristiana koa izy ireo, ary ny devoly dia miasa eny rehetra eny mba hamono sy hanimba ilay finoana. Io no fahasamihafana. Ity no mariky ny androntsika. Izay manan-tsofina ho enti-mihaino, henoy! Iza no manana maso hahita?
Hanjaka ny fifangaroana. Ho henonao ny tsaho miady, fa tsy mbola ho avy ny ady. Horohoron-tany, tondra-drano, rivo-doza, aretina, ary areti-mandringana dia tonga amin'ny fotoana rehetra ihany koa izy ireo. Ny toetrandro sy ny hafanana dia hiova eto ambonin'ny tany. Ireto ny sasany amin'ny "fanaintainan'ny fahaterahana."
Ho avy ny mosary. Nasehon'i Jesosy tamiko vao haingana io. Tao amin'ny efitranoko aho, ary rehefa nipetraka aho, niomana hatory, dia nahita cavalier mainty tonga. Midika izany ny mosary. Reko hoe, "Hanana vola ry zareo fa tsy hanana mofo", izay midika fa afaka manana vola ianao hividianana azy nefa tsy hahita na inona na inona.
Avy eo hirodana ny vola rehetra, ary tsara raha atolotra ny volanao ankehitriny, satria hanjavona. Hisy ny fikomiana be. Hahita fiovana eny an-dalambe ianao. Samy hiady an-kalalahana ny olona. Tsy manan-tsafidy hafa ny governemanta afa-tsy ny hananganana lalànan'ny maridra Amin'izay fotoana izay ihany koa no hanombohan'ny lalàna miaramila. (Tsindrio Eto hamaky izay nosoratan'i Fr. Naseho momba ny ady i Michel.
Avy eo ho avy ny fampitandremana. Hitako izany. Tsy hamiratra intsony ny kintana sy ny masoandro ary ny volana. Mainty daholo ny mainty. Tampoka tampoka any an-danitra, hisy famantarana an'i Jesosy hiseho ary hampamirapiratra ny lanitra sy izao tontolo izao. Ho eo amin'ny Hazo fijaliana Izy, tsy amin'ny fijaliany, fa amin'ny voninahiny. Ao aoriana ao anaty hazavana mamirapiratra dia hiseho ny tarehin'ny Ray, Ilay Andriamanitra Marina. Izany dia ho toky anao.
Avy amin'ny ratra eo an-tanan'i Jesosy sy ny tongony ary ny ilany, dia hiposaka manerana ny Tany rehetra ny tara-pitiavana sy ny famindram-po. Raha ao anaty fiaramanidina ianao dia hijanona. Raha mitaingina fiara ianao, aza matahotra - hijanona ny fiara. Raha manontany ahy ianao hoe: "Ahoana no hanaovana an'izany?" Hiteny aho hoe: "Andriamanitra dia Andriamanitra." Izy ilay Ray Mahery Indrindra, Mpamorona ny lanitra sy ny Tany. Raha nametraka Fr. I Michel mivoaka eo amin'izao rehetra izao, toy ny vovoka iray izay, heverinao fa tsy mahasakana azy akory izany? Mino ve ianao fa ny fiaramanidina kely anao dia hanelingelina Azy? Tsia. Izao no nolazain'Andriamanitra tamiko; nefa koa nambarany tamin'ny hafa ireo zavatra ireo, toy ny any Garabandal izay inoan'ny Md Padre Pio.
Hatsahatra amin'ny fotoana rehetra ny zava-drehetra, ary ny lelan'ny Fanahy Masina dia hanazava ny feon'ny fieritreretana rehetra eto ambonin'ny tany. Ny tara-pahazavana avy amin'ny marin'i Jesosy dia hanindrona ny fo rehetra, tahaka ny lelafo, ary hahita ny tenantsika toy ny ao amin'ny fitaratra eo anoloantsika isika. Ho hitantsika ny fanahintsika, sarobidy aminy ny Ray, ary ny faharatsiana ao anatin'ny olona tsirairay no haseho amintsika. Ho iray amin'ny famantarana lehibe indrindra omena an'izao tontolo izao izy io hatramin'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty.
Rehefa nivavaka nandritra ny faran'ny fihaonambe Vatican II ny Papa Jaona XXIII dia tsy maintsy mivavaka ho an'ny Fiangonana ihany izy fa tsy ny mivavaka ho an'ny Fiangonana ihany no nahazo ny fiangonana. Izy dia nangataka ny Pentekosta ho an'ny zanak'olombelona rehetra. Ary izao no hitranga. Jesosy dia hamaly io vavaka nataon'i Papa Joany XXIII io.
Haharitra dimy ambin'ny folo minitra ny taratra ary ao anatin'ity fitsaram-pankasitrahana feno famindram-po ity dia hahita avy hatrany izay toerana halehany raha toa ka tokony ho faty avy eo izy ireo: lanitra, fandroana, na afobe. Fa tsy mihoatra ny fahitana intsony, dia hahatsapa fanaintainan'ny fahotany izy ireo. Ireo izay handeha amin'ny purgatory dia hahita sy hahatsapa ny fanaintainan'ny fahotany sy ny fanadiovana azy. Ho fantatr'izy ireo ny lesoka nataony ary hahalala izay tsy maintsy ahitsy ao anatiny. Ho an'ireo akaiky an'i Jesosy dia hahita izay tsy maintsy ovainy mba hiaina miaraka tanteraka Aminy.
Tian’ny Ray ny hitoriako fa tsy mila matahotra ianao. Ho an'izay mino an'Andriamanitra dia ho andro feno fitiavana izany. Ho hitanao izay tokony hotsorinao hanatanterahana ny sitrapony bebe kokoa, hanaiky bebe kokoa ny fahasoavana tiany homena anao ho an'ny irakao eto an-tany.
Ho an'ireo dia hankany amin'ny helo, may. Tsy ho simba ny vatan'izy ireo fa ho tsapan'izy ireo hoe manao ahoana ny helo satria efa teo izy ireo. Ny hany tsy hita dia ny fahatsapana. Hiaina ny kapoka ataon'ny devoly izy ireo, ary betsaka no tsy ho tafavoaka velona noho ny fahotany lehibe, hoy aho aminao. Nefa ho fitahiana ho azy ireo izany satria hangataka famelana izy ireo. Ho famonjena amin'izy ireo izany.
Betsaka no tsy mahazo ny Filazantsaran'i Matio, Toko 24:
Avy hatrany taorian'ny fahoriana tamin'izany andro izany, dia hohamaizina ny masoandro, ary ny volana tsy hanome fahazavana, ary ny kintana hiraraka avy eny amin'ny lanitra, ary hohozongozonina ny herin'ny lanitra. Ary amin'izany ny famantarana ny Zanak'olona dia hiseho any an-danitra, ary hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary hahita ny Zanak'olona avy eo amin'ny rahon'ny lanitra amin'ny hery sy voninahitra lehibe. Ary haniraka ny anjeliny amin'ny trompetra izy, dia hangonin'izy ireo ny olom-boafidiny avy amin'ny vazan-tany efatra, hatramin'ny faravodilanitra rehetra. (Matio 24: 29-31)
Hitranga ny alahelo rehefa hiaina ny tsy fahombiazany sy ny fanaintainan'ny fahotany ny olona. Haneho an-kalalahana ny fanolanan-tenany izy ireo, tsy fantany ny manodidina azy, satria ho voakasiky ny zavatra niainany sy natahotra izy ireo, toy ny tany Fatima rehefa nanomboka nandihy ny masoandro ary nilentika tamin'ny olona 100,000 izay nandohalika ary niaiky ny fahotany ampahibemaso, natahotra maty.
Andriamanitra Ray nanome hafatra momba ny Fampitandremana tamin'ny 6 aprily 2018:
Henoy ny feoko. Henoy ny teniko nambaran'ny Zanako Malalako, Jesosy. Izy no Teniko izay mampahery, manasitrana ary mamonjy.
Aza matahotra amin'ity indray mitoraka ity. IZAHO IZY aho ary tsy hamela volon-doha hiala amin'ny lohanareo raha tsy ekeko.
Maro aminareo no matahotra, mitady ny fotoana hitsabohana an'ity tontolo ity. Ny Zanako dia izay haneho ny voninahiny rehefa tonga ny fotoana. Aminy, ho tanteraka ny rehetra. Ny vavakinao sy ny sorona ataonao, miaraka am-panahin'i Mary zanako vavy, ary natolotro ho famerenana ny sorona masin'ny Zanako, vonjeo izao tontolo izao. Ny vavaka tsotra sy manetry tena dia afaka mamely an'i Satana. Aza kivy ny fonareo. Reko ny vavakinao.
Lazaiko aminareo marina tokoa fa ny famindram-poko feno fitiavana dia hiaina araky ny fanavotana natolotry ny Zanako Malalako.
Tsy mila fahafatesana sy fanamelohana ho an'ny olona rehetra aminareo aho. Mijaly be dia be, herisetra be, be dia be ny fahotana ateraky ny Tany izay nataoko. Henoko izao ny tarainan'ny zazakely sy ny ankizy rehetra izay novonoin'ny fahotan'ny zanako izay miaina eo ambany fanjakan'i satana. TSY MANDALAZA IANAO. ("Mahery be ireo teny ireo," hoy i Michel.)
Mivavaha ary matokia, tsy tiako ianao ho tahaka ireo tsy manam-pinoana sy hangovitra mandritra ny fisehoan'ny Zanak'olona. Mifanohitra amin'izany, mivavaha ary mifalia ary raiso ny fiadanam-be nomen'i Jesosy zanako, Jesosy.
Fantatro momba anao, ny zanakao, ny fianakavianao. Henoko ihany koa ny fitakian'ny fonao. Mivavaha ho an'ity Andron'ny famindram-poko ity, izay haidina amin'ny alàlan'ny fisehoan'i Jesosy Zanako.
Inona ny alahelo rehefa tsy maintsy manaja ny safidinao malalaka aho ary tonga dia manome fampitandremana izay tafiditra ao anatin'ny famindram-poko koa. Miomàna ary mitandrema amin'ny ora famindram-poko.
Misaotra anao aho, anaka.
Hanohy ny lahatsoratra manaraka amin'ny "fisintomana virtoaly" miaraka amin'i Fr. Michel, kitiho eo FIZARANA 6: Fr. Michel Rodrigue - Matio 24 ao amin'ny Baiboly miresaka ny fotoanantsika.
↑1 Fanamarihan'ny editor: Namaly an'io fanoherana io koa i John John Newman: "Fantatro fa sarotra ny fotoana rehetra, ary isaky ny misy saina matotra sy miahiahy, velona ho an'ny voninahitr'Andriamanitra sy izay ilain'ny olona, ​​dia mety tsy mandany fotoana firy. mampidi-doza toy ny azy ihany. Amin'ny fotoana rehetra dia manafika ny Eglizy izay tena Renin'izy ireo ny fahavalon'ny fanahy ary mampitahotra sy mampatahotra farafaharatsiny rehefa tsy mahavita ratsy izy. Ary amin'ny fotoana rehetra dia misy ny fizahan-toetra manokana izay tsy nianjadian'ny hafa… Tsy isalasalana fa, nefa mbola miaiky izany ihany, kanefa mieritreritra aho… ny antsika dia manana haizina hafa noho ny teo aloha rehetra. Ny loza mety hitranga amin'ny fotoana eo alohanay dia ny fihanaky ny areti-panjakan'ny tsy fivadihana, izay nambaran'ny Apôstôly sy ny Tompontsika fa izy no loza ratsy indrindra amin'ny andro farany amin'ny fiangonana. Ary farafaharatsiny aloka, endrika mahazatra amin'ny andro farany no ho tonga manerana an'izao tontolo izao. ” -St. John Henry Cardinal Newman (1801-1890 AD), toriteny tamin'ny fanokafana ny Seminera St. Bernard, 2 Oktobra 1873, The Infidelity of the Future
Posted in Angels, Demonia sy ny devoly, Fr. Michel Rodrigue, Messages, Ny fanazavana momba ny feon'ny fieritreretana, Ny fanaintainan'ny asa, Ny vanim-potoana amin'ny Anti-Kristy, Ny fotoan'ny fahoriana, Fampitandremana, fanavaozana, fahagagana, Videos.
← FIZARANA 6: Fr. Michel Rodrigue…
FIZARANA 4: Fr. Michel Rodrigue… →